Drupal | mmshare
Use this to talk about all Drupal related Articles and Researches.
How to InstallaWYSIWYG text editor in Drupal 7
Submitted by everlearner on Wed, 04/27/2011 - 15:59
In Drupal 7, we can install WYSIWYG editors in various ways.
The most flexible method is using WYSIWYG API with CKEditor or TinyMCE. I'm using WYSIWYG API+TinyMCE on minitsg.com (D7) and CKEditor on myanmarlanguage.org (D6)
The following procedure is for Drupal7and the screenshot is from MinITSG server.
Read more about How to InstallaWYSIWYG text editor in Drupal 7
Understanding CCK - Introduction - CCK နိဒါန်း
Submitted by everlearner on Mon, 04/18/2011 - 15:01
CCK ဆိုတာ Drupal CMS အတွက် အလွန်သုံး၀င်တဲ့ module တစ်ခုပါ။ နာမည် အပြည့်အစုံက Content Construction Kit ဖြစ်ပါတယ်။ Drupal CMS ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ CCK ကို ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိနားလည် အသုံးချနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Content နဲ့ Content Manangement System (CMS) တွေ အကြောင်းကို အသေးစိတ် သိချင်သေးရင် Understanding Content, Web Content & Content Management Systems နဲ့ ဆက်စပ် ဆောင်းပါးတွေမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Read more about Understanding CCK - Introduction - CCK နိဒါန်း
Learning Drupal from Community Created Videos - Part One
Submitted by mmshare on Sun, 12/19/2010 - 16:10
Most of the new Drupalers always say, Drupal is not easy to learn. It is true if we have to do selfstudy. However the Drupal community around the World already shared their Drupal learning experience by creating tutorials with multimedia videos. This is our first part of Drupal tutorial videos. We organize the videos created by the community in order of Drupal basic to some intermediate level.
Drupal ကို စပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေ အများဆုံး ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့ “လေ့လာရတာ ခက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ တကယ်လို့ Drupal ကို သင်ပေးတဲ့သူ မရှိလို့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာရပြီ ဆိုရင် အဲဲဒီစကားက အတော်လေးကို မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့က Drupal လေ့လာသူတွေက သူတို့ရဲ့ သင်ယူလေ့ကျင့်မှု အတွေ့အကြုံတွေကို ဗီဒီယို ရုပ်သံဖိုင်တွေအဖြစ်နဲ့ ဖန်တီးပြီး အများအတွက် ပြန်လညေ်၀မျှထားတာတွေ ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီဗီဒီယိုတွေကို အစီအစဉ်တကျနဲ့ စုစည်းပေးထားပါတယ်။ အခြေခံအကျဆုံး အဆင့်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ Drupal ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများကနေ အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်လောက် အထိ နားလည်သွားနိုင်စေဖို့ ဗီဒီယိုတွေကို အစီအစဉ်တကျ စုစည်းပေးထားပါတယ်။
Read more about Learning Drupal from Community Created Videos - Part One
Building & Playing Drupal Websites with Installation Profiles - Learning Drupal From Experts
Submitted by everlearner on Tue, 11/16/2010 - 15:26
Drupal ကို အခုမှ စလေ့လာတဲ့ သူတွေအတွက် Localhost မှာ Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အချိန် - ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက “ဘာဆက်လုပ် ရမလဲ” ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ WordPress လို Blog Engine အတွက်ဆိုရင်လည်း Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Blog ရေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေသလို၊ Joomla လို CMS မှာဆိုရင်လည်း Install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Sample Data တွေ ကိုပါ Install လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဆင်သင့်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဆိုက်ကို အလွယ်တကူ လေ့လာပ
Read more about Building & Playing Drupal Websites with Installation Profiles - Learning Drupal From Experts
Request3years3weeks ago
Bookmark for drupal3years3weeks ago
Can't read unicode4years3months ago
Gzipping (Compressing) Components of the Web Pages - အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖိသိပ်ပေးပို့ခြင်း
Configure/Remove ETags to Improve Website Performance
Add an Expires oraCache-Control Header - ကုန်ဆုံးချိန် သို့မဟုတ် Cache-Control header တစ်ခု ထည့်သွင်းထားခြင်း
Reducing the Number of DOM Elements to Speed Up Our Websites
Drupal Learning Tips and Tricks For Beignners and Beyond
Programming & Math Basic Relationships
Introduction to System Administration & Troubleshooting - စနစ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြဿနာရှင်းလင်းခြင်း - နိဒါန်း